Halkee kasoo bilowday Khilaafka Jabhadaha qabaa'ilka Itoobiya?
By Mohamud Ahmed Said (Mass)
Jabhadaas ka jiray Itoobiya ayaa waxaa intooda badan taakuleen dhaqaale iyo saanad military ka heli jireen wadamada Masar iyo Soomaaliya, gaar ahaan Jabadaha TPLF(Jabhadii Tigreeega ) ELF (Jabhadii Eritariyaanka ) & ONLF ( Jabhadii Soomaalida). waxaa si hagar la'aan u taakuleyn jiray kacaankii Soomaaliya, waxayna ahayeen Jabhadihii ugu xoogana ee ka jiray Itoobiya, looguna hor aasaaasey.
Mabda'a ay ku dagaal galayeen
Jabahadii ka jiray dalka Itoobiya way kala mabada' gedisanayeen, Jabhad walba waxay laheyd mabda' u gaar ah oo ay ka duulayeen, wax kaliya ee mideeyey waa dagaalka ay kula jireen taliskii Dergiga. Marka laga reebo labada Jabhadood Soomaalida & Eritariyaanka ayagu aamin sanaa aragti ah gooni-goosad, inta kale sida tii Oromada (OPDO) tii Amaxaara (ANDM) tii Dadyowga Koonfurta (SEPDM) iyo tii Tigreeega (TPLF).
Heeshiiskaan ayaa u ogaaladay in Jabhada Tigreeega TPLF la wareegto hogaanka xisbiga iyo dalka, waxaana loo doortay gudomiyaha xisbiga & Ra'iisul wasaraha dalka Meles Zenawi, kaasoo hayey mudo dhowr iyo laabatan sano.
Markii ay kusoo baraarugeen Jabhadihii kale ayagoon waxba gacanta ugu jirin, bay bilaabeen isbaheysi ka dhan ah TPLF. Jabhada TPLF ayaa ku guuleystay in ay dhankeeda usoo jiido Jabhada Dadyowga Koonfurta taasoo ka dhigeysa awood isku dheeli tiran, oo ah labo garab oo isla'eg.
Waana su'aasha dadka Itoobiya ay doonayaan in jawaab dagdag ah loo helo anigu macno wayn ilama aha in ay keenidoonto Kabixitaanka uu meesha ka baxay Hailemariam Desalegn.
W/Q: Mohamud Ahmed Said (Mass). Aragtida qoraalka waxay u gaar tahay qoraha, kama tarjumayso Siyaasadda Garowe Online.
Koronto la'aan soo wajahday shacabka dalka Itoobiya
Caalamka 01.05.2018. 14:29
Dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan ayaa isku khilaafsan Wabiga Nile kadib markii Addis Ababa...
Itoobiya oo markii ugu horeysay yeelanaysa Ra'iisul Wasaare Muslim ah
Afrika 28.03.2018. 00:18
Xaalad Deg Deg ah oo la geliyay Itoobiya kadib Iscasilaadii Hailemariam
Caalamka 16.02.2018. 23:07
Desalegn oo shaaciyay sababta ku kaliftay inuu is-casilo
Afrika 16.08.2018. 15:19
Madaxweyne Muuse Biixi oo la kulmay Hailemariam [Sawirro]
Somaliland 16.01.2018. 23:49
Qarax ka dhacay Fagaare uu Abiy Axmed dad kula hadlayay [DAAWO]
Afrika 23.06.2018. 12:02
Toddobaad kadib afgembigii Al-Bashiir, waa sidee Xaaladda Sudan? 20.04.2019. 09:30